विराटनगरमा जसपाद्वारा विरोध प्रदर्शन - News Birat
विराटनगरमा जसपाद्वारा विरोध प्रदर्शन
विराटनगर, ३ असोज–संविधान दिवसमा जनता समाजवार्दी पार्टी नेपाल मोरङले विराटनगरमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ । संविधानमा मधेशी, महिला, दलित, मुस्लिम लगायतसिमान्तकृत समुदायको अधिकार नसमेटिएको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेको हो ।
संविधान दिवसलाई कालो दिनका रुपमा मनाउने पार्टीको केन्द्रीय सर्कुलर बमोजिम विरोध प्रदर्शन गरिएको जनता समाजवार्दी पार्टी नेपाल मोरङका नेता मो. कादीरले बताए ।
सो पार्टीले शनिबार विराटनगरमा विरोध ¥याली निकालेको छ । विरोध ¥याली पछिको कोणसभामा मो. कादीर, राजकुमार यादव, संजय सिंह, नरेस मण्डल, अरबिन्द झा लगायतका नेताले मधेशी, महिला, दलित, मुस्लिम लगायतसिमान्तकृत समुदायको अपनत्व हुनेगरी संविधान संशोधन हुनुपर्ने बताए । उनीहरुले बर्तमान संविधानले सवैको समान अधिकारको ग्यारेन्टी नगरेकाले संविधान दिवस आफुहरुका लागि कालो दिन भएको बताए ।
शनिबार, ३ आश्विन २०७७, २१:५२ September 19, 2020 मा प्रकाशित